भगवानसँग भुलेर पनि नमाग्नुहोस् यी कुरा, हुनसक्छ अशुभ ! - Dainik Plus info
Home / Dharma / भगवानसँग भुलेर पनि नमाग्नुहोस् यी कुरा, हुनसक्छ अशुभ !
काठमाडौँ । हामी विश्वमा भएका सबै मानिसहरु आफ्नो फरक फरक धर्म भएपनि आफ्ना पूजा गर्ने मन्दिर, गुम्बा अथवा विभिन्न ठाउमा गएर आफ्ने देवतालाई पूजा गछौ । तर यस देवतालाई पुजा गर्नुको पछाडि सबैको एउटा न एउटा स्वार्थ रहेको हुन्छ ।जब मानिस खुसी हुन्छ ,त्यसले कहिल्यैपनि देवताको पूजा गदैन् ।
तर जब मानिस कुनै पिडामा पर्छ तब उसले देवतालाई विभिन्न आफ्नो स्वार्थ अनुसारको वस्तुहरु माग्ने गर्दछ । त्यसैले तपाई पनि यसरी नै हेरक दिन पूजा गर्न जानुहुन्छ भने यस्तो कार्य भुलेर पनि नगर्नुहोस् यदि यी कार्य गरेको मागेको फल नपाउने मान्यता रहेको छ । ती कामहरु यी हुन् ।
१.पहिलो हो , शिव, गणेश अनी भैरवलाई तुलसी चढाउनु हुँदैन ।२।त्यसैगरी दास्रो हो , स्नान नगरी तुलसीको पातलाई टिप्नु हुँदैन । शास्त्र अनुसार यदि कुनै व्यक्ति ननुहाइ तुलसीको पात टिप्छ भने पुजा गर्दा यस्तो पात भगवानद्धारा स्वीकार हुँदैन ।
३।तेस्रोमा तुलसीको पातहरुलाई ११ दिनसम्म बासी मानिँदैन । यसको पातहरुमा जल चढाएर पुन भगवानलाई अर्पित गर्न सकिन्छ ।
४.त्यसैगरी चौथोमा यो दिन बिहिवार, एकादशी द्धादशी, संक्रान्ति तथा साँझमा तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन ।५।पाचौमा सुर्यदेवलाई शंखको जलबाट अघ्र्य दिनु हुँदैन । भने बुधवार अनि बिहिवार पिपलको रुखमा जल चढाउनु हुँदैन । त्यसमा पनि दुवोलाई भने बिहिवार टिप्नु हुँदैन ।